Portable dịghịzi analyzer
Ọrịa Ụmụaka Diagnostic Kit
Akụkụ okuku ume na System Diagnostic Kit
Gbasara akụrụ Function Diagnostic Kit
Obi Diagnostic Kit
Mmiri ọgwụ Diagnostic Kit
Mbufụt Diagnostic Kit
Diagnostic Kit maka D-Dimer ...
Diagnostic Kit (latex) maka Rotavirus Group A
Diagnostic Kit (latex) maka Rotavirus Group A N'ihi na vitro na-achọpụta ọrịa were naanị Biko gụọ a ngwugwu fanye ọma tupu iji na-erube nnọọ soro ntuziaka. Ntụkwasị obi nke nnwale pụta enweghị ike na-ekwe nkwa ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla deviations si ntuziaka a ngwugwu wet. Bu n'obi eji Diagnostic Kit (latex) maka Rotavirus Group A adabara qualitative nchọpụta nke Rotavirus Group A antigen mmadụ Nsị n'omume. Nke a ule na-zubere maka ahụike ọkachamara anyị ...
Diagnostic Kit (latex) maka Rotavirus Group A na adenovirus
Diagnostic Kit (latex) maka Rotavirus Group A na adenovirus N'ihi na vitro na-achọpụta ọrịa were naanị Biko gụọ a ngwugwu fanye ọma tupu iji na-erube nnọọ soro ntuziaka. Ntụkwasị obi nke nnwale pụta enweghị ike na-ekwe nkwa ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla deviations si ntuziaka a ngwugwu wet. Bu n'obi eji Diagnostic Kit (latex) maka Rotavirus Group A na adenovirus adabara qualitative nchọpụta nke Rotavirus Group A na adenovirus antigen mmadụ Nsị n'omume. Nke a te ...
Diagnostic Kit (colloidal Gold) maka IgM Antibody ka Human Enterovirus 71
Diagnostic Kit (colloidal Gold) maka IgM Antibody ka Human Enterovirus 71 N'ihi na vitro na-achọpụta ọrịa were naanị Biko gụọ a ngwugwu fanye ọma tupu iji na-erube nnọọ soro ntuziaka. Ntụkwasị obi nke nnwale pụta enweghị ike na-ekwe nkwa ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla deviations si ntuziaka a ngwugwu wet. Bu n'obi eji Diagnostic Kit (colloidal Gold) maka IgM Antibody ka Human Enterovirus 71 bụ a colloidal gold immunochromatographic nnwale maka qualitative mkpebi siri ike nke IG ...